Banyere Anyị - Cangzhou Asc Toner Production Co., Ltd.
Cangzhou ASC toner Production Ltd, hiwere na Julaị, 2003.
Ọ bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu maka imepụta ngwa nbipute na toner, katriji toner na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Dị ka otu n'ime ndị kasị emeputa na-ere ahịa nke ụlọ ọrụ consumables,ASC ka ewu a zuru ezu R & D na ule labatory.And nwere ọkachamara R & D otu ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa.We ọma ulo oru anyị onwe anyị ụdị"ASC""语印""艾斯克" "Aisk" etc.Na 2019, usoro ọhụrụ anyị nke "Ụzọ anụ ahụ nke dey agba na usoro ya" gara n'ihu itinye akwụkwọ maka patent na ụlọ ọrụ ikike ọgụgụ isi steeti, wee mejupụta oghere n'ahịrị a.
Anyị na-mgbe niile na-elekwasị anya àgwà akara na gburugburu ebe obibi nchebe, na gafere mbụ ISO9001 àgwà certifications na ubi a. Dị ka ndị na-eduga Enterprise, anyị sonyere na drafting nke "National Standard of Toner" n'afọ 2007 abd 2014, ma ụlọ ọrụ. na ngwaahịa merie nsọpụrụ nke "elu-tech Enterprise nke Hebei Province"na" elu-tech ngwaahịa nke Hebei n'ógbè".
Anyị na-atụkwasị obi mgbe niile "Ọ dịghị mma, naanị mma!"dị ka ọkọlọtọ nke enterprise mmepe, na ụlọ ọrụ na-ele" Gbanwee na ebuli ngwaahịa quality'and"Research na mmepe nke ọhụrụ ngwaahịa"dị ka ito ihe, nke mere na ngwaahịa àgwà nwere ike ịbụ morestable, ụdị ngwaahịa nwere ike ịba ụba karịa, yana ọrụ azụmaahịa zuru oke iji nweta mmepe na-adịgide adịgide ma kwụsie ike nke ụlọ ọrụ.
Anyị kwa afọ mmepụta ruru 3000 ton toner, 800,000 PC katrij, 9 nde rịbọn, toner ụdị cover copier na laser na-ebi akwụkwọ niile ngwaahịa na-ekpo ọkụ anabata na Europe, Africa, Southeast Asia.
Cangzhou ASC Toner Production LTD guzobere.
Na 2004, ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na" ịgbasa ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ, meziwanye ihe oyiyi ụlọ ọrụ, na-eleba anya na nkwalite akụrụngwa", ma tinyekwuo ego iji gbasaa mmepụta ihe.New ụlọ ọrụ n'ala ohere n'elu 26,000 square mita .including ọhụrụ toner mmepụta ụlọ ahịa, toner mbukota ụlọ ahịa, na-abawanye 4 mmepụta edoghi na elu mba larịị.Annual mmepụta iru 600 tọn.
Ọzọ na 2007 nyekwara ihe karịrị 600 nde RMB, mmụba nke abụọ mmepụta ahịrị, kwa afọ mmepụta ikike na-abawanye ruo 1200 tọn.
Na 2009, etinyere 1400 nde RMB iwu abụọ ọkọlọtọ ogbako, abụọ nkwakọba, na ụba toner cartridge oru ngo.Annual mmepụta ike iru 1800tons nke toner na 800,000 iberibe cartridges.
N'afọ 2009, usoro ọhụrụ anyị nke "Ụzọ anụ ahụ nke agba akọrọ na usoro ya" gara nke ọma itinye akwụkwọ maka patent na State Intellectual Property Office ., ma mejupụta oghere na ahịrị a.
Na 2010, ụlọ ọrụ ẹkenam mba elu elu mmepụta technology, na kwukwara mmepụta edoghi, kwa afọ mmepụta maka toner esịmde 3000tons, na toner cartridges ruru 800000 PC.We bụ otu n'ime ole na ole Nsukka nke nwere ikike PF mmepụta ma toner na toner katrij ọnụ. .
N'afọ 2011 rịgoro ahịrị ngwaahịa anọ ọzọ, ikike mmepụta nke toner kwa afọ site na tọn 1800 gbagoro ruo tọn 3,000.
Na 2018, anyị ngwaahịa e gosiri dị ka elu-edu ngwaahịa na Hebei n'ógbè site Hebei n'ógbè bureau nke àgwà na oru nlekota oru.
Na 2018, alaka ụlọ ọrụ mbụ nke ASC na mba ofesi- alaka Russia ka e hiwere na Moscow